यसपालिको दशैं पनि सामाजिक दूरी अपनाएर र संयम भएर नै मनाउने योजनामा छु- महरा
प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०७८, शनिबार ०५:१९
सुष्मा महरा प्रबन्ध निर्देशक फेसियल हाउस तथा वरिष्ठ सौन्दर्यविद्
सुष्मा महरा वरिष्ठ सौन्दर्यविद् हुन् । उनी एक सफल महिला उद्यमी पनि हुन् । दुई दशकदेखि सौन्दर्यशास्त्रको क्षेत्रमा क्रियाशील महरा डेढ दशकदेखि सौन्दर्य व्यावसायमा संलग्न रहदै आएकी छिन् । नेपाल, भारत र थाईल्याण्डबाट सौन्दर्यसम्बन्धी विषयगत तालिम हासिल गरेकी महराले सौन्दर्यशास्त्रमा अध्यापन पनि गराउँदै आएकी छिन् । उनी अहिले व्यावसायिक रुपमा फेसियल हाउस ब्राण्डमा चेन विजनेश सञ्चालन गर्दै आईरहेकी छिन् । समय सन्दर्भ अनुसारका फेशनेबल डिजाईन,मेकअप साथै सौन्दर्य क्षेत्रको अग्रणी व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यूटीसियन तथा हेयर डिजानरलाई हेयर स्टाईलसम्बन्धी एड्भान्स सिप उपलब्ध गराउने प्रख्यात व्यूटी सैलुन फेसियल हाउसलाई ‘नेपाल्स नम्बर वान व्यूटी सैलुन’ अवार्ड प्रदान पनि गरिएको छ ।
त्यसो त सौन्दर्य विधामा नियमित तवरले कलम चलाउँदै आएकी महराका समसामयिक लेख रचनाहरु प्रकाशित हुँदै आएका छन् । निर्भिक र साहसी महिला व्यावसायीको रुपमा परिचित उनी काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघकी कोषाध्यक्ष समेत हुन् । वरिष्ठ सौन्दर्यविद् महरासँग कोभिड १९ ले सौन्दर्यको क्षेत्रमा पारेको प्रभावका साथै सौन्दर्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सम्भावनाका बारेमा गरिएको विशेष कुराकानी –
तपाइले सञ्चालन गरेको फेसियल हाउस कस्तो हो ?
फेसियल हाउसलाई सबैले मन पराउनु भएको छ । स्थापना भएको धेरै वर्ष भइसकेकाले यसले सबैको विश्वास जितेको छ । मैले जुन उद्येश्यले यो सञ्चालन गरेको थिएँ त्यसमा म खुशी छु । सबै लक्ष्य पूरा गर्न सकें भन्ने कुरा त आएन किनभने यसो भनियो भने मान्छेले भोलिको बाटो खोज्दैन र थप प्रगति गर्न सक्दैन । म आफ्नो काममा सन्तुष्ट छ, सेवाग्राहीको भावनाको सम्बोधन गर्न सकेको छु भन्ने लाग्छ । मैले यसको धेरै प्रचार गर्नुपरेको छैन किनभने जसले सेवा लिएर जानुहुन्छ उहाँहरुले त्यो ठाउँ र सेवा राम्रो छ भनिदिएपछि पुग्ने रहेछ । राजनीतिक दलका नेता, कलाकार, पत्रकारका साथै अन्य क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाइसकेकाहरु र सर्वसाधरण पनि धेरै आउनुहुन्छ । सस्तो दरमा राम्रो सेवा दिन सकेको छु भन्नेमा म ढुक्क छु । सबैले माया गरिदिएकाले नै मैले अहिले धेरै शाखा खोलिसकेको छु । सुन्दरताको पारखीहरुको पहिलो रोजाई बनेको छ फेसियल हाउस ।
हिजोमात्र सुर्खेत गएर शाखा खोलेर आएँ । अन्य ठाउँमा पनि शाखा खोलेर सेवा दिने मन छ । जहाँ माग हुन्छ त्यहाँ सम्भव भएसम्म शाखा खोल्ने मेरो योजना हो । मानिसले कर्म गर्नुपर्छ एकदिन अवश्य फल पाइन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसलाई नेपालको नम्बर वान बनाउने लक्ष्य छ मेरो । मैले गरेको यही क्षेत्रको सेवालाई देखेर धेरैले उत्कृष्ठ व्यूटीसियन अवार्ड पनि पाएको छु जसले गर्दा मलाई काम गर्ने हौसला मिलेको छ । मेरो फेसियल हाउसमा धेरैलाई रोजगारको अवसर दिएकी छु भने तालिम लिएकाहरुले पनि आफ्नै हाउस खालेर जीविकोेपार्जन गरेका छन् यसमा मलाई धेरै खुशी लागेको छ । म नयाँनयाँ प्रविधिसँग ‘अपडेट’ भइरहने भएकाले समयसापेक्ष अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा गम्भीर छु । तालिमका क्रममा म विदेश गएर आफूलाई पनि परिमार्जन गर्दै गइरहेकी छु ।
कोभिड १९ का कारण समग्र व्यापार व्यवसायमा कस्तो असर परेको छ ?
कोरोनाका कारण सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भयो । त्यसको प्रतक्ष्य असर हामीले पनि भोग्यौं । झण्डै दुई वर्षदेखि थला परेको हाम्रोमात्र होइन सबैको व्यापार व्यावसाय अब अलिकति सहज ढंले अघि बढ्ला कि भन्ने अनुमान लगाएका थियौं त्यो हुन सकिरहेको छैन । अहलिे त आशाआशैमा बाँच्नुपर्ने भएको छ । यति सजिलो पनि नहोला कि भन्ने सोचेका थियौं पहिले तर केही भए पनि सहज भएको छ । ठूलो कुरा बाँचियो यसैमा गर्व गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण कतिको ज्यान गयो, कति अझै पनि आफ्नो दैनिकी चलाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब केही सहज होला र पुरानै अवस्थामा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ । यो कसैको व्यक्तिगत समस्या नभएको र विश्व नै संकटमा भएको हुनाले पनि धैर्य गर्नुको विकल्प छैन ।
हामीले कोरोनाको समयमा पनि ग्राहकलाई सेवा दियौं । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर काम ग¥यौं । फेरि अर्को कुरा ग्राहकहरुसँग प्रतक्ष्य रुपमा उभिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले हामीलाई निकै असहज थियो तर पनि जेनेतेने अहिलेसम्म टिकायौं । जुनसुकै क्षेत्रमा कोरोनाले असर पारेकाले हामीले मात्र गुनासो गर्ने कुरामात्र पनि हुँदैन । अझै पनि केही व्यापार व्यावसाय खुल्न सकेका छैनन् । हामी कोरोनासँग लड्दै र जुध्दै काम गर्दै आएका छौं । दुई वर्षका दशैं तिहार त्यत्तिकै गए । होला कि आज नभए भोलि त होला भन्दाभन्दै समय गयो । आम्दानी नभएपछि घर भाडा, विद्युत महशुल, कर, बैंकको व्याज, किस्ता, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्ने दायित्वलाई पूरा गर्न अधिकांश व्यावसायीलाई कठिनाई भइरहेको छ । हाल बजार केही खुकुलो भए पनि ग्राहकहरुको उपस्थिति निकै न्यून छ । लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा यसले व्यापार व्यावसायको क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ । त्यसैले अहिलेको परिस्थिति निकै जटिल छ । हामीले चाहेर पनि व्यावसाय गर्न सम्भव छैन ।
सरकारले मौद्रिक नीतिबाट दिएको सहुलियतबाट राहत मिल्ने अवस्था कत्तिको देख्नुभएको छ ?
सरकारले ल्याएको बजेट जति निराशाजनक थियो मौद्रिक नीती तुलनात्मक रुपमा उत्साहप्रद रहयो । पहिलेको सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा यो सरकारले ल्याएको बजेटले सबैको मन छोएको छ । व्यापारीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम आएका छन्, मुख्य कुरा कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो । सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित व्यावसायीलाई राहत दिन धेरैखाले कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, आशा गरौं कार्यान्वयनको दिशामा सरकार अघि बढ्ला । तर पनि सरकारले जति गर्नुपर्ने हो त्यो पर्याप्त छैन । सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण निकै संकुचित पाराको छ । निजी क्षेत्रका व्यावसायीले सधैं सरकारलाई हारगुहार गरिरहनुपरेको छ । हामी त सरकारले व्याज छुट दिने व्यवस्था गरिदियोस् भन्छौं त्यो सम्भव नहोला तर पेशालाई टिकाउने वातावरण भने सरकारले मिलाइदिनुपर्छ । कमसेकम पूर्ण रुपमा प्रभावित व्यावसायलाई भारी व्याज छुट दिने गरी पुनर्कर्जाको नीती अख्तियार गर्न सक्नुपर्दयो । घरभाडामा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत छुट र व्यावसाय निर्वाद रुपमा सञ्चालनमा आएको ३ महिनापश्चात मात्रै बहाल चुक्ता गर्न सक्ने गरी बाध्यकारी नियम लागू गर्नु पर्दथ्यो । हुन त घरवालाका पनि आफ्नै समस्या होलान् उनीहरुको समस्या सामधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो देखिएन ।
व्यवसायीहरुले नाफा कमाउञ्जेल चुप लागेर बस्ने तर आफूलाई अप्ठयारो पर्दा राज्यबाट सहुलियत पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नु उचित छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?
जसले अर्थतन्त्रलाई बुझेको छैन उसले लगाउने आरोप हुन् यी । कोभिडबाट सिर्जित अवस्था भनेको अरुभन्दा बेग्लै र फरक परिवेश हो । कोभिडबाट विश्व नै प्रभावित छ । अरु देशले कोरोनाबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भनेर योजना बनाए, उनीहरु सफल भए र पुरानै अवस्थामा फर्किसकेका पनि छन् । हामीले पनि गर्न चाहे त्यो सम्भव छ तर कसैलाई चासो छैन । निजी क्षेत्रको हकमा कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालको जिडीपीमा निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत हाराहारी योगदान रहदै आएको थियो । त्यस योगदानलाई भुलेर कोरा कुरा गर्दै जाने हो भने भविष्यमा अर्थतन्त्रमा पर्ने असर झनै भयावह बन्न सक्छ । अरु देशमा निजी क्षेत्रलाई नगद प्रवाह गरेर राज्यले आडभरोसा दिइराखेको छ । त्यसो गर्नुको मतलब निजी क्षेत्र पनि राज्यको अभिन्न अंग हो र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने मुख्य मेरुदण्ड पनि निजी क्षेत्र हो भनेर नै हो । यहाँ धेरैको रोजीरोटीको सवाल जोडिएको छ भने देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउने वा कमजोर पार्ने भन्ने विषय पनि प्रमुख रहन्छ । जुन यहाँले नाफा कमाउञ्जेल चुप लागेर बस्ने कुरा गर्नुभयो यो सबैमा लागू हुने विषय होईन् । कोभिड अघि पनि साना तथा मझौला व्यावसाय सञ्चालन गर्न त्यसै पनि मुश्किल थियो । हाम्रोमा लागू हुँदै आएको कर प्रणाली, बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथिको नियन्त्रणमा सरकारको फितलो नियमन, नाममात्रको अनुगमन, श्रम कानुनका केही प्रावधानजस्ता कार्यले गर्दा ढुक्कका साथ व्यापार व्यावसाय गर्ने माहौल अझै पनि बनिसकेको छैन । व्यावसाय गरेर सबैले नाफा मात्र कमाएका छन् भन्नु पनि गलत छ । सामान्य अवस्थामा समेत व्यापारमा गरेको लगानी डुब्न सक्छ । जोखिम मोलेपछि केही नाफा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले व्यवसायीका पीडालाई पनि सबैले बुझ्नु पर्छ ।
तपाईको विचारमा अहिलेको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?
हाल सरकारले लिएको नीती विल्कुलै गलत छ । सरकार हावादारी गफ गर्नमै व्यस्त छ । सरकारले बन्द भएको समय र आगामी दिनमा व्यावसायलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सबै व्यापारीहरु अब के होला भनेर अन्यौलमा छन् । घरधनी भाडा माग्छ, व्यावसाय बन्द छ त्यसैले पनि कार्यालय खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने अन्यौल कायमै छ । । यो समस्याका कारण कति ठाउँमा त व्यावसायीले आत्महत्या नै गरिसकेका छन् । यस्ता समस्याहरुप्रति बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ । जसका लागि सरकारले विज्ञ टोली बनाएर अहिलेको परिस्थितिको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नुपर्छ । यो कोभिडको कहर कहिलेसम्म रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था नरहेकाले उद्योग व्यापारको क्षेत्रमा पर्दै आएको र भोलिका दिनमा थपिने बोझलाई कसरी कम गर्ने भन्नेमा दृष्टि लगाउनुपर्छ ।
धेरैजसो देशले व्यावसायीलाई खोप लगाइसकेका छन् । हामीले भनें हामी खोप लाउन चाहन्छौं भनेर बिन्ती गर्नुपर्ने अवस्था छ, योभन्दा लाजमर्दो कुरा अरु हुन सक्दैन । जबसम्म सरकारले सबै नागरिकलाई निःशर्त खोप लगाउँदैन तबसम्म व्यावसाय सहज ढंगले गर्न सकिँदैन । सरकारले खोप धेरै आयो र अझै पनि आउँछ भन्दै आएको छ त्यो कहाँ कसले लगाएका छन् भन्ने नै टुंगो छैन । खोप लगाइसकेपछि मानिसहरु ढुक्क हुने भएकाले पनि व्यापारी तथा व्यावसायीको मागप्रति सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ ।
हामीले अहिले तीन भिन्न प्रणालीमा काम गरिरहेका छौं । हाम्रा ग्राहकहरुलाई सकेसम्म घरमा आफैले गर्न सक्ने सौन्दर्य स्याहार गर्न आग्रह गरिरहेका छौं र यसका लागि हामीले फोन र भाईवरमार्फत परामर्श सेवा दिइरहेका छौं । सौन्दर्य सामग्रीहरुको हकमा अनलाईनमार्फत सामग्रीहरु देशैभर पुग्ने व्यवस्था गरेका छाै ।
यसपालिको दशै कसरी मनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ?
यसपालिको दशै पक्कै पनि पहिलेभन्दा अलि सहज हुने देखिएको छ । कोरोनाको त्रास पनि कम भएको छ । विगतमा दुई वर्ष लगातार दशैं मनाउन नपाउँदा मन खल्लो भएको थियो । त्यतिबेला त चाडबाडभन्दा पनि ज्यानकै कुरा ठूलो हो भन्ने सम्झिनुप¥यो । यसपालिको दशैं सामाजिक दूरी अपनाएर र संयम भएर नै मनाउने योजनामा छु । चाडबाड वर्ष दिनमा आउने भएकाले पक्कै पनि मनमा खुशी छ । कोभिडको संक्रमण दर पनि घट्दै गईरहेको छ यो खुशीको कुरा हो । तपाईंको यो लोकप्रिय अनलाइनबाट म समस्त नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाई, बुबाआमाका साथै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने सबैलाई यो बडादशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।